‘सेक्स’ नचाहने केटीको कथा – Health Post Nepal
२०७६ माघ ९ गते १०:१०
हँसिलो अनुहार, पुष्ट जिउडाल भएकी एक स्टाइलिस केटी सन्ध्या !
उनले आफ्नो उमेर ४० वर्ष भनिरहँदा, कसैले पत्याउँदैनन् ।
‘तपाई त मुस्किलले ३० वर्षको जस्तो देखिनुहुन्छ ! ४० वर्षको जस्तो त कुनै कोणबाट पनि लाग्दैन । यसको राज के हो ?’
‘न ब्वाइफेन्ड छ न श्रीमान नै । न परिवार छ न तनाव’ सन्ध्या हाँस्दै जवाफ दिन्छिन् ।
सन्ध्या एक नामी कम्पनीमा मार्केटरको रुपमा कार्यरत छिन् । उनी दिल्लीको एनसीआरमा एक फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेकी छिन् ।
उनी एसेक्सुअल(अलैंगिक) महिला हुन् । उनलाई यौन चाहना नै छैन । त्यसैले उनको विवाह भएको छैन । र, परिवारको विषयमा पनि उनको धारणा फरक छ ।
एसेक्शुअल त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ जो आमा मानिसले जस्तो पुरुष वा महिलाप्रति यौन आकर्षण महसुस गर्दैनन् । यो एक तरिकाको यौन झुकाव (सेक्शुअल ओरिएन्टेशन) हो ।
‘पहिचान सधै परिवार भन्दा माथि’
सन्ध्या चाहँदैनन् कि उनको पहिचान परिवारको संरचना भित्र हराओस्् ।
उनी परिवारमा पति–पत्नी र बालबच्चा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जरुरीको रुपमा लिँदैनन् । उनी भन्छिन्, ‘परिवारका लागि प्रत्यक व्यक्तिको आफ्नो फरक–फरक परिभाषा हुनसक्छ ।’
सन्ध्या सम्झिन्छिन्, ‘२३–२४ वर्षको उमेरमा म भित्र केही फरक भएको आभास हुन थाल्यो । मेरो उमेरका सबै केटीका व्वायफ्रेन्ड बन्न थालेका थिए । उनीहरू केटाहरूसँग डेटिङमा गइरहेका हुन्थे । तर, ममा त्यस्तो कुनै परिवर्तन आएको थिएन ।
सन्ध्यालाई केटा मनै नपर्ने होइन । उनलाई केटा मन पनि पर्थे ।
‘त्यो समयमा एउटा केटा मलाई पनि निकै मन परेको थियो । मलाई उसको साथ निकै आत्मिय लाग्थ्यो । नजिक हुँदै गर्दा उसको चन्चलता बढ्न थाल्यो । यो स्वभाविकै पनि हो । जब कुरा सेक्ससम्म पुग्यो मलाई एकदम असहज महशुस भयो । मलाई यस्तो लाग्यो कि यो कुरा मेरो शरीरले स्वीकार नै गर्न सक्दैन । जस्तो कि मलाई सेक्सको आवश्यकता नै छैन’, उनले भनिन् ।
सन्ध्यालाई सेक्ससँग डर पनि थिएन । नत उनलाई सेक्स बिना जीवनमा कुनै कुराको कमी नै महशुस हुन्थ्यो ।
कसरी पहिचान गरिन आफ्नो सेक्सुआलिटी ?
उनी भन्छिन्, ‘म सम्बन्धमा रमाइलो त महशुस गर्थे । तर, मलाई यौन आकर्षण भने अलिकति पनि थिएन । जुन केटालाई म मन पराउँथे उसको हात समातेर हिँड्न निकै मन पथ्र्यो । उससँग अंकमाल गर्न, कुरा गर्न निकै आनन्द लाग्थ्यो । तर, सेक्सका कुरामा भने मलाई दिक्क लाग्थ्यो । मेरो शरीर कुनै प्रतिक्रिया नै जनाउँदैनथे ।’
सन्ध्यालाई यस्तो समस्या पटक–पटक हुन्थ्यो । उनले आफ्नो समस्याका बारेमा साथीहरूलाई भन्दा सबैले उनलाई डाक्टरसँग भेट्न सुझाव दिन्थे । तर, सन्ध्याले डाक्टरलाई भेट्नु भन्दा पहिले आफैले यसबारेमा पढ्ने र बुझ्ने कोसिस गरिन् । यस बारे जानकारी दिन उनी सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न बेभ साइटमा सक्रिय भइन् । उनी केही एसेक्शुअलिटी ग्रुपमा पनि जोडिइन् ।
सन्ध्या भन्छिन्, ‘सुरुमा मलाई लागेको थियो की मलाई सुरुमा कुनै गम्भीर समस्या थियो । आफ्नो सम्बन्ध टुट्नुको दोषी आफैलाई मान्न थालेकी थिए । तर, जसैगरी म एसेक्शुअलिटीका बारेमा पढ्न थाले र बुझ्न थाले मैले आफैले आफैलाई स्वीकार गर्न थाले । विस्तारै मैले बुझे मलाई न कुनै रोग छ । म न कुनै असाधारण महिला हुँ । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मेरो अन्य एसेक्शुअल व्यक्तिहरूसँग पनि चिनजान हुन पुग्यो । यसरी नै म आफ्नो शरीर र सेक्शुअलिटीका बारेमा पुरै सहज हुन पुगें ।’
के यसपछि उनले आफ्नो लागि पार्टनर नै खोजिनन् ?
यसको जवाफ दिँदै सन्ध्या भन्छिन्, ‘म कुनै पुरुषको निकट भए कुनै न कुनै बेला उसले मबाट सेक्सको अपेक्षा गर्न सक्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । मैले आफू भित्रको समस्या बुझि सकेकी थिए । जसप्रति म सजक थिए । मलाई कुनै एसेक्शुअल केटा पनि मेरो पार्टनर बन्न सक्छ भन्ने बिचार नपलाएको पनि होइन । त्यसैले मैले कुनै पार्टनर खोज्ने वा डेट गर्न नै छोडिदिए ।’
के एसेक्शुअल कम्युनिटीबाट उनलाई कोही साथी मिलेन । जससँग उनी जीवन बिताउन चाहिन्छन् ? यस बारेमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा त थुप्रै भेटिए । तर, वास्तविक जीवनमा कोही पनि भेटिए ।
थुप्रै मान्छेमा यो समस्या हुने भए पनि कतिपयले आफू भित्रको समस्या नै नबुझ्ने उनको बुझाइ छ । उनले यदि एसेक्शुअल कम्युनिटीमा राम्रो केटा भेटिए उसको बारेमा सोच्न सकिने बताइन् ।
एसेक्शुअल महिलाका लागि परिवार के हो ?
यसको जवाफमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘अहिले त सिंगल नै छु । आगामी दिनमा पनि म सिंगल नै रहनेछु । हाल मेरा साथी, मेरो बिल्डिङमा वस्ने केटीहरू नै मेरो परिवार हो । हामी अलग–अलग रुममा बस्छौ र हाम्रो एकै कमन किचेन छ । हामी भेटघाट गर्छौं, एक अर्कोको सुख दुःमा साथ दिन्छौ । मेरो लागि यही परिवार हो । म मेरो परिवार म माथी हावी होस् र मेरो खुशीको तुसारापात होस् भन्ने चाहन्न ।
सन्ध्या यदि मन मिल्ने साथी पाए उसको साथमा रहन सक्छिन् तर, उक्त सम्बन्धको पनि आफ्नो दायर हुनेछ ।
आमा बन्ने र बच्चाका बारेमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘मलाई अर्का कै बच्चा मन पर्छन् । म आफ्ना बच्चा बनाउन चाहदैन । मलाई लाग्दैन कि बच्चाको चाहना नराख्दैमा कुनै महिलालाई कमजोर बनाउँछ ।’
उनी भन्छिन्, ‘मान्छे मलाई प्राय सोध्छन्, बच्चा भएन भने तपाईको बृद्धावस्थामा कसले हेरविचार गर्ला ? मलाई थाहा छ म एक्लै रहँु र मैले आफ्नो ख्याल आफै गर्न सकुँ । मैले आफ्नो ख्याल आफै राख्नु छ । त्यसैले म सधै आफ्नो फिटनेस बारे ध्यान दिइरहेकी हुन्छु ।
बिहे नगर्दा केही बिग्रने होइन
‘मेरो सानो बहिनीको पनि बिहे भइसकेको छ । त्यसैले बिहेको दवाव अझ बढी छ । अहिले मैले मान्छेको दवावलाई सुन्नै छोडिसके । म एक्लै हुँदा पूरै आत्मनिर्भर भएको महशुस गर्छु । म एक्लै लन्च र डिनरका लागि जाने गर्छु । सपिङ्ग पनि एक्लै गर्छु । बिरामी हुँदा पनि म अस्पताल एक्लै जाने गर्छु । मलाई बिहे जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्दैन । मेरो बिचारमा जीवनको सबै भन्दा ठूला कुरा भनेको मानसिक शान्ति हो’, उनी भन्छिन् ।
उनको अफिस र बाहिरी दुनियाँमा मान्छेको रबैया कस्तो हुन्छ ?
यस बारेमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘मान्छेलाई विश्वासै लाग्दैन की म ४० वर्षको उमेरसम्म पनि एक्लै छु । उनीहरू सोचिरहेका हुन्छन् यसले झुटा बोलिरहेकी छे । उनीहरू मेरो थुप्रैसँग सम्बन्ध होला या मलाई कुनै रोग लागेको होला सोचिरहेका होलान् । मान्छे मेरो बारेमा अनेकन कुरा गरिरहेका हुन्छन् । तर, म तिनीहरूको कुरामा ध्यानै दिइरहेकी हुँदैन । मेरो साथीहरू एकदमै राम्रा छन् । तर, उनीहरू एसेक्शुअलको बारेमा बुझ्छन् नत यो कुरालाई स्वीकार नै गर्छन् । उनीहरू मेरो बारेमा चिन्ता गर्छन् र बेला–बेला मलाई डाक्टरकोमा जाने सल्लाह दिइरहेका हुनछन् । म डाक्टरकोमा जाँदैन । किनकी मलाई थाहा छ मलाई कुनै रोग नै लागेको छैन ।’
समाजमा एक वर्ग यस्तो छ जुन समलिंगी वा एसेक्शुअल सम्बन्धलाई मान्यता दिँदा परिवारको इज्जत नै जान्छ । यस बारेमा सन्ध्या भन्छिन्, ‘निकै सामान्य भाषामा सम्झाउने कोशिश गर्छु । कुनै पनि बगैचामा एकै रंगका फूल हुँदैनन् । कुनै रातो रंगा हुन्छन्, कुनै पहेलो रंगका हुन्छन् र कुनै जानी । त्यसैले त्यो बगैचा सुन्दर लागि रहेको हुन्छ । यसैगरी अलग–अलग मान्छेका कारण नै हाम्रो सृष्टि सुन्दर हुन्छ ।’ उनी संसारमा कुनै मान्छेले बिहे नगर्दैमा केही नबिर्गिने मान्यता राख्छिन् ।